Umbono6: Isixazululo Esingabizi, Esenziwe Ngokwezifiso, se-Enterprise Marketing Automation | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Okthoba 21, 2016 Douglas Karr
Inkampani enkulu kunazo zonke yase-Australia yokumaketha i-imeyili manje isinwebela e-United States, inikela ngesisombululo sokumaketha sebanga elenziwa ngezifiso ezinkampanini eziphakathi nemakethe nama-ejensi ngentengo engabizi. I-Vision6 yisixazululo esihlanganisiwe sokumaketha nge-imeyili esakhelwe abathengisi nama-ejensi. Vision6 ihlanganisa i-imeyili ezishintshayo, i-SMS, amafomu kanye nemithombo yezokuxhumana kusixhumanisi esisebenziseka kalula.
Izinkulungwane zama-ejensi edijithali afaka IClemenger BBDO Australia, kanye namaqembu wokukhangisa angaphakathi ezinkampanini ezibandakanya i-Audi Sydney, BMW Brisbane, iRoyal Society for Prevention of Cruelty of Animals (RSPCA) kanye neminyango eminingi kahulumeni, bathembele kuVision6 ukukhomba izethameli zabo ngama-imeyili asezingeni eliphezulu, ahlukaniswe yizenzo zamakhasimende.
Ukumaketha nge-imeyili kune-ROI ephezulu kunanoma yisiphi isiteshi sokumaketha sedijithali, futhi amabhizinisi enza kahle afuna ipulatifomu elula, kodwa engabizi. Lokhu kuholele ukuthi imakethe yase-US ibe ngomunye wabancintisana kakhulu nabahlinzeki bezixazululo zokumaketha, ikakhulukazi eminyakeni yamuva. Siyaziqhenya ngokuletha esinye sezixazululo ezinembile kakhulu, ezisetshenziswa ngabasebenzisi ezitholakala emakethe yase-US. Mathew Myers, umsunguli woMbono6
Izici ze-Vision6 Marketing Automation
Okuthuthukile kwe-imeyili - UTurbo ukhokhisa isizukulwane sakho sokuhola ngokusetha imikhankaso yokukhulisa i-imeyili eyenzelwe ukuguqula imikhondo ibe ngamakhasimende akhokhelayo. Dala ukuhamba komsebenzi kwama-imeyili enziwe ngezifiso.
Hudula bese ulahla isihleli - Dala futhi uhlele ama-imeyili abukeka ngobuchwepheshe ngokuchofoza okulula, hudula bese uphonsa. Kuyindlela engenazinkinga yokuhlela izifanekiso.
Izibonisi Ezinobungane Bamaselula - Khetha ithempulethi ye-HTML ephendulayo efanelekile ebukeka kahle kuwo wonke amadivayisi.
Okuqukethwe okunamandla - Thuthukisa imiphumela yakho ye-imeyili ngokwenza ngokwezifiso okuqukethwe kwakho kwe-imeyili ukusebenzisa imininingwane yedatha yakho. Ukubuka kwesipredishithi se-Vision6 kwenza ukuhlukaniswa kwedatha kube umoya.
Ukuhlolwa kwe-imeyili - Inikwe amandla yi-Litmus, hlola futhi ubuke kuqala i-imeyili yakho kumabhokisi wokungenayo angaphezu kwama-45 futhi uphumule kalula, wazi ukuthi kuzobukeka kukuhle.
Amafomu EWebhu - Faka amafomu kuwebhusayithi yakho nakwabezokuxhumana bese uqala ukuqoqa imikhondo. Dala kalula amafomu e-web ukuze afane nomkhiqizo wakho. Umhleli weVision6 wenza kube lula ukufaka izithombe nokwenza ngezifiso amafomu ukuze ahambisane nezidingo zakho.
Ukuhlanganiswa - Shintsha imisebenzi kalula ngokuhlanganiswa. Xhuma ukumaketha kwakho kwe-imeyili namakhulu ezicelo kufaka phakathi iGoogle Analytics, WordPress neFacebook.
Ukubika okusebenzisanayo bese uqhafaza amamephu - Imibiko ebonakalayo neningiliziwe inikeza imininingwane ebalulekile ekuziphatheni kwakho kwababhalisile. Buka imiphumela yakho yemikhankaso ye-imeyili ivuleka bukhoma futhi ubone ukuthi ubani ofunda ama-imeyili wakho kudeskithophu nakwiselula.
Bhalisela Mahhala nge-Vision6
Tags: hudula bese uphonsa isihleli se-imeyiliokuqukethwe kwe-imeyili okunamandlaukuhlolwa kwe-imeyiliFacebookI-google analyticsi-litmusukuzenzekelayo kokuzenzekelayoumbono6WordPress